My Freakonomics - Zọpụta Ego Gị na Ego Ka Mma | Martech Zone
My Freakonomics - Chekwaa mmefu ego gị na ụgwọ ọrụ ka mma
Tuesday, July 25, 2006 Thursday, June 18, 2015 Douglas Karr
Emechara m ịgụ Fremanomics. O teela oge m ga-edochali akwụkwọ azụmahịa. Azụrụ m akwụkwọ a n'abalị Satọdee ma bido ịgụ ya na Sọnde. Emechara m ya na nkeji ole na ole gara aga. Ekwetara m na ọ na-ewe ụfọdụ ụtụtụ, nke mere ka m na-egbu oge n’ọrụ. Isi akwukwo a bu ihe puru iche Steven D. Levitt na-ewe mgbe ọ nyochara ọnọdụ.
Ihe m enweghi na ọgụgụ isi, mkpoputa na ụtọ asụsụ - Enwere m obi ike na ịnwa ilele nsogbu anya n'akụkụ ọ bụla tupu ị kwado ihe ngwọta. Ugboro ugboro karịa, onye ọzọ na-eme ka ihe ngwọta ziri ezi dị ka m na-eche maka ozi ndị ọzọ. Papa m si na nwata kụziiri m na ọ na-atọ ụtọ ile ihe niile anya dị ka mgbaghoju anya. Iji mejọọ mgbe ụfọdụ, ọ bụ etu m si agakwuru ọrụ m dịka Onye njikwa Ngwaahịa Sọftụwia. 'Amamihe nkịtị' yiri ka ọ bụ amamihe dị n'ime ụlọ ọrụ anyị. Maka ọtụtụ akụkụ, ndị mmadụ 'na-eche' na ha maara ihe ndị ahịa chọrọ ma gbalịa ịzụlite azịza ziri ezi. Ndị otu anyị tinyeworo ugbu a na-ajụ ụzọ ahụ ma na-awakpo nsogbu ahụ site na ịgwa ndị niile metụtara ya okwu, site na ahịa iji kwado, site na ndị ahịa gaa ụlọ anyị. Approachzọ a na-eduga anyị na ngwọta ndị bụ uru asọmpi na zute ndị ahịa anyị agụụ na-agụ maka atụmatụ. Kwa ụbọchị bụ nsogbu ma rụọ ọrụ maka nsogbu. Ọ bụ nnukwu ọrụ!
'Freakonomics' kachasị ukwuu m nwere mgbe m rụrụ ọrụ maka akwụkwọ akụkọ na East. Adịghị m n'ụzọ ọ bụla na onye ọ bụla dị ka Maazị Levitt; otu o sila dị, anyị mere nyocha yiri nke ahụ ma wepụta azịza nke mere ka amamihe nke ụlọ ọrụ ahụ ghara iru ala. N'oge ahụ, anyị nwere ihe karịrị mmadụ 300 oge na-enweghị uru na ọtụtụ na obere ụgwọ ma ọ bụ karịa karịa. Mgbanwe anyị dị egwu. Onye ọ bụla na-arụ ọrụ ga-azụrịrị onye ọ bụla na-arụ ọrụ ọ were izu ole na ole iji ruo ọkwa na-arụpụta ihe. Anyị lechara data ma chọpụta na (ọ bụghị ihe ijuanya) na enwere mmekọrịta nke ogologo ndụ iji kwụọ ụgwọ. Ihe ịma aka a na - achọta 'ebe dị ụtọ'
Site n'ọtụtụ nyocha, anyị chọpụtara na ọ bụrụ na anyị ejiri $ 100k na anyị nwere ike ịkwụghachi $ 200k na ụgwọ ndị ọzọ akwụ ụgwọ maka oge ọrụ, ntụgharị, ọzụzụ, wdg. Ya mere… anyị nwere ike imefu $ 100k ma chekwaa $ 100k… ma mezue ụyọkọ ndi be anyi obi uto! Anyị mepụtara usoro ụgwọ ọrụ ụgwọ ga-abụrịrị ma bulie ụgwọ ọrụ anyị na-akwụ yana kwụghachi ndị ọrụ ọ bụla na ngalaba ahụ ụgwọ. Onwere otutu ndi oru eweputara onu ogugu ha ma ha anataghi ihe ozo - ma anyi chere na akwuola ha ugwo.
Nsonaazụ ahụ karịrị ihe anyị tụrụ anya ya. Anyị merụrụ elu ịchekwa ihe dịka $ 250k site na njedebe nke afọ. Nke bụ́ eziokwu bụ na itinye ego n'ọrụ ụgwọ ọrụ nwere mmetụta nke domino na anyị atụghị anya ya. Oge igafe gbadara n'ihi ụba ọrụ, anyị zọpụtara ọtụtụ ụgwọ nchịkwa na oge n'ihi na ndị njikwa jiri obere oge ego na ọzụzụ na oge na-achịkwa, yana ụkpụrụ omume nke ndị ọrụ rịrị elu nke ukwuu. Mmepụta gara n'ihu na-abawanye ebe ego ụmụ mmadụ na-efu. N’èzí otu anyị, onye ọ bụla na-agba isi ya.
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị m ji nwee obi ụtọ n'ihi na enyere m ụlọ ọrụ na ndị ọrụ aka. Offọdụ ndị ọrụ ahụ nwere obi ụtọ n'ezie maka ndị njikwa ahụ mgbe mgbanwe ndị ahụ malitere ịdị. Ruo oge dị mkpirikpi, abụ m Rock Star nke ndị nyocha! Enweela m nnukwu mmeri ọzọ na ọrụ m, mana ọ nweghị onye wetara obi ụtọ onye a mere.
Bill Gates na Napoleon Dynamite
Chineke: Nghọta na nyocha
Jul 26, 2006 na 6: 58 AM
Emechara m Freakonomics n'onwe m izu ole na ole gara aga. Nwee obi ụtọ ịgụ otu ị nwere akụkọ ụwa gị nke Freakonomics.
Jul 27, 2008 na 8: 21 AM
Ọ dị ịtụnanya otu mmadụ ga-esi were akwụkwọ kacha baa uru ma nwee nghọta ma tinye ya n'ọrụ na ndụ ha
na-echetara m usoro mmụta akụ na ụba nke m weere n'otu oge ọkọchị
Onwere otu ụmụnwaanyị nọ etolite etolite mere ihe ngosi ahụ iji gosi onwe ha site na ọgụgụ isi nke aka ha
N'agbanyeghi ihe okwu a bu na o gha aghaghi inwe nkwekorita ya na ndu ya na ezi na ulo ya na eme ego ha na ndu ha.
Jul 27, 2008 na 11: 30 AM
Mmasị na-akpali mmasị. Anaghị m achọ iji akwụkwọ m mesie 'ọgụgụ isi' m ike. Onye ọ bụla maara m maara na m bụ mgbe niile Ihọd. Enwere m olileanya na ị ga-arapara gburugburu ma gụọ ederede ole na ole tupu ị mee nkwupụta dị mkpirikpi.
Ebumnuche akwụkwọ a bụ ime ka ndị mmadụ chee echiche n'echeghị echiche. Ihe omuma m di n’elu bu nani ihe omuma iji me ka echiche di iche iche puta ihe. Imirikiti ụlọ ọrụ anaghị ekwenye na ị nwere ike ịchekwa ego site na ịkwụ ndị mmadụ ụgwọ karịa - ọ mara mma nke ọma ma ọrụ m dị na akara maka ya.
Enwere m obi ụtọ maka ihe ndị otu m mere mgbe anyị mere nke a, achọrọ m ịkọrọ ya ndị na - agụ akwụkwọ m.
Na - ee - Ekwenyere m na m na-asọ.